မိန်းကလေးတိုင်းပြုလုပ်တတ်ကြတဲ့ လူသိမခံချင်တဲ့အရာတွေ – Trend.com.mm
Posted on June 10, 2018 June 4, 2018 by San Wadi Hnin
လူတိုင်းမှာ လျို့ဝှက်ချက်ဆိုတာရှိစမြဲပဲမဟုတ်လား။ ကြီးမားတဲ့လျို့ဝှက်ချက်နဲ့ သေးငယ်တဲ့လျို့ဝှက်ချက်ပဲကွာတာပါ။ အဲဒီလိုလျို့ဝှက်ချက်ရှိတဲ့ လူတွေထဲမှာမှ လျို့ဝှက်ချက်တွေပိုလို့များပြားတဲ့သူဟာမိန်းကလေးတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ သဘာဝတရားကြီးကိုက ယောက်ျားနဲ့မိန်းမမှာ မိန်းမကိုပိုပြီးလျို့ဝှက်အပ်ရမယ့်အရာတွေပေးအပ်ခဲ့တာကိုး။ မိန်းကလေးတွေရဲ့လျို့ဝှက်ချက်က နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွေထဲမှာကိုရှိနေတာပါတဲ့။မိန်းကလေးတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ ပုံမှန်လိုပြုလုပ်တတ်ကြပြီိး လူသိမခံချင်တဲ့အရာတွေကတော့….
မိန်းကလေးတွေလည်းလူတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက် ယောက်ျားလေးတွေလိုပဲလေလည်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်် အဲ့ဒါကိုသူတို့က တတ်နိုင်သမျှလူသိမခံချင်ပါဘူးတဲ့။လူ့သဘာဝဆိုပေမယ့်် ရှက်စရာကောင်းတယ်ထင်လို့ပါ။ ဒါကတော့ ယောက်ျားလေးတော်တော်များများလည်းဒီလိုိပဲထင်ပါတယ်။
အရင်ခေတ်ကတော့ တစ်အိမ်တက်ဆင်းအတင်းပြောတာတို့ စပ်စုတာတုိ့ပေါ့လေ။ဒါပေမယ့် နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အတင်းပြောသူတွေဟာဆိုရင်ဖြင့် သူတို့ရဲ့ အတင်းတုတ်တဲ့နည်းတွေကို upgrade လုပ်လို့ အဆင့်မြင့််လာကြပါပြီ။အရင်ကလို ရွာရိုးကိုးပေါက်လျှောက်ပြီးအတင်းမပြောတော့ပဲ Online ပေါ်ကနေ ခလုတ်ကလေးတွေတတောက်တောက်နှိပ်ရင်းသက်တောင့်သက်သာအတင်းပြောနေကြပါပြီ။ စုံစမ်းထောက်လှမ်းတာလည်းဒီလိုပါပဲ။ အချို့မိန်းကလေးတွေဆို FBI ထက်တော်တဲ့သူတွေတောင်ရှိသေး။ကောင်လေးတစ်ယောက်ချောလို့ ထောက်လှမ်းရေးဆင်းတာ သူ့ဆယ့်နှစ်ဝမ်းကွဲအဒေါ်ရဲ့ယောက်ျားဘက်ကညီမရဲ့သမီးလေးနဲ့ကြိုက်နေတဲ့ကောင်လေးမှာ ဘီလီလို့ခေါ်တဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အထိကို အသေးစိတ်ကျကျစုံစမ်းနိုင်ကြသူတွေပါ။ ဒါပေမယ့်် သူတို့ဒီလိုလုပ်မှန်းတော့သူများတွေကိုမသိစေချင်ပြန်ပါဘူး။
ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ် သိပ်ပြီးတော့လည်းဆိုင်ချင်မှဆိုင်မယ်၊ဆိုင်ချင်လည်းဆိုင်မယ်..စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးကြည့်မရဖြစ်နေတဲ့သူ၊ချဉ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်တော့အမြဲရှိကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလူကိုအသားလွတ်ကြီးမုန်းနေမှန်းတော့သူများတွေကိုမသိစေချင်ကြပါဘူး။ဘာလို့မုန်းတာလဲဆို ဖြေရတာခက်လို့ပါ။
ပြုံးစိစိမလုပ်နေပါနဲ့။ကိုယ်တို့အားလုံး ဒါမျိုးလုပ်တတ်ကြပါတယ်။လျှော်ရမယ့်ရက်ထက်နည်းနည်းတော့ကျော်ဝတ်လိုက်ပြီးမှလျှော်တာတို့၊လျှော်ရမှာပျင်းလို့ဆိုပြီး အသစ်ပဲဝယ်ဝတ်လိုက်တာတို့လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ့်အတွင်းရေးကိစ္စမို့ လူသိမခံချင်တာလည်းအပြစ်မရှိပါဘူးနော်။ ဒါပေမယ့် အတွင်းခံတွေမှန်မှန်မလျှော်တဲ့ကိစ္စက ကံကောင်းရင်အရေပြားမှိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကံဆိုးရင် ရင်သားကင်ဆာပါဖြစ်စေနိုင်တာမို့ မှန်မှန်လျှော်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
ကိတ်ချင်တာတို့၊နှုတ်ခမ်းထူချင်တာတို့လိုပြောတာပါ။ခြုံငုံပြီးပြောရရင်တော့ sexy ကျချင်ကြတယ်ပေါ့။ မိန်းမဆန်တဲ့မိန်းကလေးတွေဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘယ်လိုနေရင် sexy ကျလဲဆိုပြီး ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ရှေ့မှာ မထော်မနန်းအမူအရာမျိုးစုံလုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့်် အဲ့ဒီလိုလုပ်တာကိုသူငယ်ချင်းတွေကိုတောင်သိစေချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါတွေကတော့ မိန်းကလေးတိုင်းလုပ်တတ်ကြပြီး လူသိမခံချင်ကြတဲ့ အရာတွေပါ။ ကိုယ်နဲ့ဘယ်နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လဲဆိုတာ တိုက်ကြည့်ပြီး ကျေနပ်နှစ်သိမ့်နိုင်ကြပါစေလို့။
လူတိုငြးမှာ လွို့ဝှကခြကွဆြိုတာရှိစမှဲပဲမဟုတလြား။ ကှီးမားတဲ့လွို့ဝှကခြကွနြဲ့ သေးငယတြဲ့လွို့ဝှကခြကွပြဲကှာတာပါ။ အဲဒီလိုလွို့ဝှကခြကွရြှိတဲ့ လူတှထေဲမှာမှ လွို့ဝှကခြကွတြှပေိုလို့မွားပှားတဲ့သူဟာမိနြးကလေးတှလေို့ပှောလို့ရပါတယြ။ သဘာဝတရားကှီးကိုက ယောကြွားနဲ့မိနြးမမှာ မိနြးမကိုပိုပှီးလွို့ဝှကအြပရြမယြ့အရာတှပေေးအပခြဲ့တာကိုး။ မိနြးကလေးတှရေဲ့လွို့ဝှကခြကွကြ နစေ့ဉလြူနမှေုဘဝတှထေဲမှာကိုရှိနတောပါတဲ့။မိနြးကလေးတှရေဲ့နစေ့ဉဘြဝမှာ ပုံမှနလြိုပှုလုပတြတကြှပှီိး လူသိမခံခငွတြဲ့အရာတှကတေော့….
မိနြးကလေးတှလညြေးလူတှပေဲဖှစတြဲ့အတှကြ ယောကြွားလေးတှလေိုပဲလလညေတြတကြှပါတယြ။ ဒါပမယြေ့ အဲ့ဒါကိုသူတို့က တတနြိုငသြမွှလူသိမခံခငွပြါဘူးတဲ့။လူ့သဘာဝဆိုပမယြေ့ ရှကစြရာကောငြးတယထြငလြို့ပါ။ ဒါကတော့ ယောကြွားလေးတောတြောမြွားမွားလညြးဒီလိုပဲထငပြါတယြ။
အရငခြတကြေတော့ တစအြိမတြကဆြငြးအတငြးပှောတာတို့ စပစြုတာတို့ပေါ့လေ။ဒါပမယြေ့ နညြးပညာတှတေိုးတကလြာတဲ့ခတကြှေီးမှာ အတငြးပှောသူတှဟောဆိုရငဖြှငြ့ သူတို့ရဲ့ အတငြးတုတတြဲ့နညြးတှကေို upgrade လုပလြို့ အဆငြ့မှငြ့လြာကှပါပှီ။အရငကြလို ရှာရိုးကိုးပေါကလြွှောကပြှီးအတငြးမပှောတော့ပဲ Online ပေါကြနေ ခလုတကြလေးတှတတေောကတြောကနြှိပရြငြးသကတြောငြ့သကသြာအတငြးပှောနကှပေါပှီ။ စုံစမြးထောကလြှမြးတာလညြးဒီလိုပါပဲ။ အခွို့မိနြးကလေးတှဆေို FBI ထကတြောတြဲ့သူတှတေောငရြှိသေး။ကောငလြေးတစယြောကခြွောလို့ ထောကလြှမြးရေးဆငြးတာ သူ့ဆယြ့နှစဝြမြးကှဲအဒေါရြဲ့ယောကြွားဘကကြညီမရဲ့သမီးလေးနဲ့ကှိုကနြတေဲ့ကောငလြေးမှာ ဘီလီလို့ခေါတြဲ့ခှေးလေးတစကြောငရြှိတယဆြိုတဲ့အထိကို အသေးစိတကြကွစွုံစမြးနိုငကြှသူတှပေါ။ ဒါပမယြေ့ သူတို့ဒီလိုလုပမြှနြးတော့သူမွားတှကေိုမသိစခငွေပြှနပြါဘူး။
ဘာရယညြာရယမြဟုတြ သိပပြှီးတော့လညြးဆိုငခြငွမြှဆိုငမြယြ၊ဆိုငခြငွလြညြးဆိုငမြယြ..စိတထြဲမှာကှိတပြှီးကှညြ့မရဖှစနြတေဲ့သူ၊ခဉွနြတေဲ့သူတစယြောကတြော့အမှဲရှိကှပါတယြ။ အဲ့ဒီလူကိုအသားလှတကြှီးမုနြးနမှနြေးတော့သူမွားတှကေိုမသိစခငွေကြှပါဘူး။ဘာလို့မုနြးတာလဲဆို ဖှရတောခကလြို့ပါ။
ပှုံးစိစိမလုပနြပေါနဲ့။ကိုယတြို့အားလုံး ဒါမွိုးလုပတြတကြှပါတယြ။လွှောရြမယြ့ရကထြကနြညြးနညြးတော့ကွောဝြတလြိုကပြှီးမှလွှောတြာတို့၊လွှောရြမှာပငြွးလို့ဆိုပှီး အသစပြဲဝယဝြတလြိုကတြာတို့လုပလြရှေိ့ကှပါတယြ။ ဒါကတော့ ကိုယြ့အတှငြးရေးကိဈစမို့ လူသိမခံခငွတြာလညြးအပှစမြရှိပါဘူးနြော။ ဒါပမယြေ့ အတှငြးခံတှမှနေမြှနမြလွှောတြဲ့ကိဈစက ကံကောငြးရငအြရပှေားမှိုဖှစစြနေိုငပြှီး ကံဆိုးရငြ ရငသြားကငဆြာပါဖှစစြနေိုငတြာမို့ မှနမြှနလြွှောဖြို့တိုကတြှနြးလိုကပြါရစေ။
ကိတခြငွတြာတို့၊နှုတခြမြးထူခငွတြာတို့လိုပှောတာပါ။ခှုံငုံပှီးပှောရရငတြော့ sexy ကခွငွကြှတယပြေါ့။ မိနြးမဆနတြဲ့မိနြးကလေးတှဆေို ကိုယြ့ကိုယကြိုယဘြယလြိုနရငြေ sexy ကလွဲဆိုပှီး ကိုယလြုံးပေါမြှနရြှမှေ့ာ မထောမြနနြးအမူအရာမွိုးစုံလုပကြှပါတယြ။ဒါပမယြေ့ အဲ့ဒီလိုလုပတြာကိုသူငယခြငြွးတှကေိုတောငသြိစခငွေတြာမဟုတပြါဘူး။
ဒါတှကတေော့ မိနြးကလေးတိုငြးလုပတြတကြှပှီး လူသိမခံခငွကြှတဲ့ အရာတှပေါ။ ကိုယနြဲ့ဘယနြှစခြုတိုကဆြိုငလြဲဆိုတာ တိုကကြှညြ့ပှီး ကွနပေနြှစသြိမြ့နိုငြကြှပါစလေို့။
ပထမဆုံးပြသတဲ့အပိုင်းမှာတင် ပရိသတ်ကြည့်ရှုနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ “What’s Wrong With Secretary Kim”